ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မိဘမဲ့ ကလေးများဂေဟာ၌ အလှူရှင်ရှိသော ရက်တွင် စားသောက်ရန် အဆင်ပြေသော်လည်း အလ?? - Yangon Media Group
လားရှိုး၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက် (၁၂) နယ်မြေ (၂၁)၊ တာပုံကျေးရွာ၊ အောင်သစ္စာကွက်သစ်ရှိချစ် ခြင်းမေတ္တာ မိဘမဲ့ကလေးများဂေဟာ၌ အလှူရှင်ရှိသောရက်များတွင် စားသောက်ရန်အဆင်ပြေ သော်လည်း အလှူရှင်မရှိသောရက်များတွင် အနည်းငယ်အခက်အခဲ ရှိနေသည့်အတွက် အလှူရှင်များ စွာလိုအပ်နေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဂေဟာတွင် တန့်ယန်း၊ မူဆယ်၊ နမ့်ခန်း၊ ဗန်းမော်၊ မိုးမိတ် ဒေသများမှ ရှမ်း၊ လားဟူ၊ကချင်၊ ဝနှင့်ပလောင်ကလေးငယ် (အမျိုးသား) ၁၃၁ဦး၊ ကလေးငယ် (အ မျိုးသမီး) ၁၂၃ ဦးခိုလှုံနေကြပြီး ဂေဟာ၌အသက်အငယ်ဆုံး က လေးမှာ နှစ်နှစ်သားအရွယ်မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအထိ စာသင် ကြားနေထိုင်နေကြသည်။
”ကျွန်မတို့ဂေဟာမှာ ကလေး ပေါင်း ၂၅၄ ဦးရှိပြီး တစ်ရက်ကို ဆန်နှစ်အိတ်ချက်ကျွေးရတယ်။ အလှူရှင်ရှိတဲ့ရက်တွေမှာ စား သောက်ဖို့အဆင်ပြေပေမယ့် အလှူရှင်မရှိတဲ့ရက်တွေမှာ အနည်းငယ် အခက်အခဲရှိတယ်။ အခြေခံ စားတဲ့ဆန်ရှိနေရင်တော့ အလှူရှင် မရှိတဲ့ရက်တွေအတွက်ကတော့ ဂေဟာကစုဆောင်းထားတဲ့ ငွေတွေထဲကနေ အသီးအရွက်တွေကိုဝယ်ပြီး ချက်ကျွေးရတယ်။ အချို့ကလေး တွေက ကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘဲ ခြောက်တန်းလောက်နဲ့ ထွက်ပြီးမြို့ထဲကဝပ်ရှော့တွေ၊ စား သောက်ဆိုင်တွေမှာ အလုပ်သွား လုပ်ကြတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ညကိုတော့ ဒီမှာပြန်အိပ်ပါတယ်။ အလှူရှင်ကတော့ အမြဲလိုအပ်နေပါတယ်” ဟုဂေဟာကြီးကြပ်သူ ဒေါ်နုနုအောင်က ပြောကြားသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ငွေ ကျပ်သိန်း ၃ဝ ကျော်တန်ဖိုးရှိဆန်၊ ဆီ၊ ကုလားပဲ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ အာလူး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီနှင့်ကလေး ငယ်ခြုံ အမွေးပွစောင်အထည် ၂၅၆ ထည်ကို ထာဝရအလင်းတန်း ပရဟိတလူငယ်များ အဖွဲ့ကလည်း ကောင်း၊ ငွေကျပ်ခုနစ်သိန်းခန့် တန် ဖိုးရှိရေသန့်၊ ဆပ်ပြာမှုန့်၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ အသားတု၊ အာလူးနှင့် ဆားတို့ကို လားရှိုးအခြေစိုက် KIA ကုမ္ပဏီကလည်းကောင်း လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဂေဟာကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဂေဟာတွင် မိဘမဲ့ကလေးများအ ပြင် ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေသော ကလေးများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေသည့် မိဘနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းများမှ ကလေးငယ်များကိုပါ ပြုစုစောင့် ရှောက်ပေးထားကြောင်းသိရသည်။
အကြောင်းအရာ အလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ (အကြို) အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ?
ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမား ၈ဝဝဝ ကျော်တွင် နှစ်ဦးသာ လူမှုဖူလုံရေး ဝင်ချင်